गणेशमानको जन्मजयन्तीमा विचार गोष्ठी
२४ कार्तिक, हेटौंडा । नेपाली काँग्रेस मकवानपुरले नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सर्वमान्य नेता एवं लौह पुरुष गणेशमान सिहको १ सय २ औ जन्मजयन्तीको अवसरमा बुधबार पार्टी कार्यालयमा विचार गोष्ठीको आयोजना गरेको छ । जन्मजयन्तीको अवसरमा वक्ताहरुले संविधान कायन्वयनका लागिसमेत गणेमान सिंहको बिचार आज पनि अनुसरण गर्न आवश्यक रहेको र नेपालका...
काँग्रेसद्वारा विरामीलाई फलफुल वितरण
२४ कार्तिक, हेटौंडा । नेपाली काँग्रेस मकवानपुरले सर्वोच्च नेता एवं लौहपुरुष स्व. गणेशमान सिंहको जन्मजयन्तीको अवसरमा बुधबार हेटौंडा अस्पतालमा फलफुल वितरण गरेको छ । हेटौंडा अस्पतालमा रहेका १५ जना सुत्केरीसहित ६० जना विरामीलाई फलफुल वितरण गरिएको नेपाली काँग्रेस मकवानपुरका जिल्ला सदस्य एवं प्रवक्ता प्रदिप कोइरालाले...
ट्रम्प अमेरिकाका राष्ट्रपति निर्वाचित
२४ कार्तिक, हेटौंडा । रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिमा बिजयी भएका छन् । ट्रम्पले २ सय ७८ इलेक्टोरल मत प्राप्त गरे भने प्रतिष्पर्धी हिलारी क्लिन्टनले २ सय १८ इलेक्टोरल मत प्राप्त गरिन् । ५ सय ३८ मध्ये जितका लागि २ सय ७५ इलेक्टोरल मत भए पुग्ने थियो । अमेरिका भएका विभिन्न मत सर्वेक्षण र...
वाल पेन्टिङ गरेको भन्दै डेढ घण्टा नियन्त्रणमा
२३ कार्तिक, हेटौंडा । वाल पेन्टिङ गरेको भन्दै मकवानपुर प्रहरीले दुई जनालाई मंगलबार डेढ घण्टा नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरीले विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माअोवादी) का कार्यकर्तालाई डेढ घण्टा नियन्त्रणमा लिएको हो । वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको पर्खालमा पार्टीको महाधिवेशनबारे वाल पेन्टिङ गरिरहेका पार्टीका सचिवालय सदस्य रामबहादुर घलान...
फेला पारेको १ लाख सम्बन्धितलाई जिम्मा
२२ कार्तिक, हेटौँडा । हेटौँडाका एक युवकले आफुले फेला पारेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाएका छन् । हेटौँडा–३ का विश्वास श्रेष्ठले आफुले फेला पारेको एक लाख रुपैँया सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाएका हुन् । विहान साढे ११ बजेतिर नविल बैंक अगाडि वेवारिसे अवस्थामा फेला पारेको रकम उनले प्रहरीको सहयोगमा हेटौँडा–५ का श्रीराम...
काँग्रेस मकवानपुरले गणेशमानको १०१ औं जन्मजयन्ती मनाउने
२२ कार्तिक, हेटौंडा । नेपाली काँग्रेस मकवानपुरले सर्वोच्च नेता एवं लौहपुरुष स्व. गणेशमान सिंहको जन्मजयन्तीको अवसरमा विविध कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ । नेपाली काँग्रेस मकवानपुरका सभापति तथा सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँको सभाध्यक्षतामा कार्य सम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले स्व. गणेशमान सिंहको १ सय १ औं जन्मजयन्ती भब्यताका साथ...
सांसद बानियाँद्वारा मन्दिर शिलान्यास
२२ कार्तिक, हेटौंडा । नेपाली काँग्रेस मकवानपुरका सभापति तथा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँद्वारा छतिवनमा सोमबार महादेव मन्दिरको शिलान्यास गरेका छन् । सांसद बानियाँले छतिवन ७ भडौरामा सिमातेश्वर महादेव मन्दिर सिलान्यास गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै सांसद बानियाँले स्थानीय क्षेत्रको विकास निर्माणका काममा सबै एकजुट...
हेटौँडामा राष्ट्रिय खेलकुद तथा व्यापार महोत्सवको तयारी तिब्र
२१ कार्तिक, हेटौँडा । हेटौँडामा मंसिर २ देखि १३ गतेसम्म हुन लागेको राष्ट्रिय खेलकुद तथा व्यापार महोत्सवको तयारी तिब्र पारिएको छ । सुमन भोम्जन स्मृति खेलकुद प्रतिष्ठानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय खेलकुद तथा व्यापार महोत्सव बारे जानकारी दिएको हो । हेटौंँडा–१० स्थित भुटनदेवी बसपार्क टिसिएनमा ११ दिनसम्म हुने महोत्सवमा ३ सय...
हेटौँडामा मौलिक नेवारी भोज हुने
२१ कार्तिक, हेटौँडा । नेवा सांस्कृतिक पुचः ले हेटौँडामा मौलिक नेवारी भोजको आयोजना गर्ने भएको छ । नेवारी भोजका लागि परिचित काठमाण्डौंको चमति खलः सँगको सहकार्यमा कार्तिक २७ गते मौलिक नेवारी भोज हुने भएको हो । भोजमा काठमाण्डौंबाट ४ सय र मकवानपुरबाट ३ सय गरी ७ सय जना सहभागी हुने पुचः का अध्यक्ष विष्णुगोपाल महर्जनले आइतबार आयोजित पत्रकार...